Ispoorteessitoota shaampiyoonichaaf gaggeessan taasifame - ! - OBN
Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa
Kubbaa Millaa Addunyaa
Ispoorteessitoota shaampiyoonichaaf gaggeessan taasifame
[OBN 04 07 2010] Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa Shaampiyoonaa Qaxxaamura Biyyaa Afrikaa 5ffaa fi Walakkaa Maaraatoonii Adunyaa 23ffaa irratti jila Itiyoophiyaa bakka bu'uun hirmaataniif kaleessa galgala gaggeessaa taasiseef.
Sirna gaggeessaa Hoteela Araaratitti raawwatame irratti bakka bu'oonni atileetota dubartootaa fi dhiirootaa,akkasumas leenjistootni haala turtii yeroo shaakallii isaanii ibsuun,dirree dorgaommii imalanitti injifannoo akka galmeessan waadaa galaniiru.
Preezdaantiin Atileetiksii Itiyoophiyaa Atileet Hayilee G/Sillaasee, hunda duursa namuusa gaarii agarsiisun, qabxii boonsaa galmeessisuu akka qaban eeraniiru. Ispoortiin atileetiksii kun ammaatti lafa qabachaa waan jiruuf, qaamni hunduu gahee isarraa eggamu bahachuu akka qabu preezdaantichi eeraniiru.
Hojii gaggeessan federeeshinichaa obbo Balaayinaa Kindee gama isaanitiin, atileetoota keenya irraa kan eeggamu abbaa injifannoo ta'uudha. Injifannoo boodas atileetoota meedaliyaa argamsiisaniif badhaasni birrii akka kennamuuf waadaa galanii jiru.
Preezdaantiin Atileetiksii Itiyoophiyaa Atileet Hayilee G/Sillaasee atileetootni keenya injifannoon yoo deebi'an badhaasa wal fakkatu dhuunfaa isaan kan raawwatu ta'uu ragaan Atileetiksii Federeeshinii Itiyoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Maddi:- TOI
609 Views 3/13/18